Proverbe 1461 Aza mitonantonana , toy ny hava-nalaina . [Cousins 1871 #668]
Proverbe 1924 Faka vilon-dRenitalata : ny an-tsobiky tsy misy ka ny an-tongoany no alaina aloha. [Rinara 1974]
Proverbe 2633 Izaho tsy mikapa an-tenantenan-taolana , tsy mandrefy hazo mijoro, tsy manintsana ny maintimolaly , tsy manozongozona ny mafy , nefa raha tokony tsy ho afaka izaho alaina . [Rinara 1974 #1471]
Proverbe 3761 Manetsa mahalana : ny ataon’ ny tena ihany no alaina . [Cousins 1871]
Proverbe 4866 Ny akaiky tsy alaina , fa ny lavitra no anganon-ganoina . [Veyrières 1913 #1578, Rinara 1974 #2837, Cousins 1871 #2131]
Proverbe 4888 Ny alain' ny vavany maningotra ny tenany , ary ny alain' ny lelany maningotra ny lohany . [Cousins 1871 #2142, Rinara 1974]
Proverbe 5103 Ny fitia alain' ny maso , raha jeren' ny maso afaka ihany, fa ny fitia alain' ny kibo na hitanam-parango aza tsy afaka . [Rinara 1974 #2995]
Proverbe 6635 Sokina anaty voaroy : hitan' ny maso fa sarotra alaina . [Houlder 1895 #1213]
Proverbe 6965 Tefy angadin-dRainimanankiarana : ny tsy masaky ny antsoro atao vely manta ; ary nony mivarotra , dia ny masak’ arina ihany no alaina . [Cousins 1871]
Proverbe 7271 Tongoa mihonkon-drazana tsy alain' ny andriana . [Veyrières 1913 #399]
Proverbe 7425 Tsy alain' andriana tongoa mihonkona Antehiroka . [Veyrières 1913 #401]
Proverbe 8191 Vidian-tsy azo, ka alai-mora foana . [Rinara 1974 #4948]
Proverbe 8370 Vorontsiloza : tsy loza , nefa, raha alaina loza ihany. [Rinara 1974 #5049, Cousins 1871]